Uppdaterades 24 maj 2021 15:18
Tabobarka iyo waxqabadyada xilliga firaaqada
Waa in dadka dhashey 2001 iyo wixii ka horeeyey ay markey isboorti sameynayaan ama waxqabad kale qabanayaan
masaafad u jirsadaan dadka kale
aanay dadka kale qalabka/aaladaha la wadaagin. Waxay tusaale ahaan taasi noqon kartaa caagadaha biyaha, af-saabka, iwm kuwaas oo candhuufta wareejin kara.
marka ay suurtogal tahay waxqabad/dhaqdhaqaaq banaanka ku sameeyaan
iska ilaaliyaan qolka beddelashda ee la wadaago,
kali loogu sameeyo safarka aad ku aadeyso ee aad kagana soo noqonayso waxqabadka
loo sameeyo waxqabadka si kooxo yaryar ah
Talladani waxaanay khusaynin dadka ku hawlan isboortiga heer xirfad ahaaneed ama carruurta iyo da'yarta dhalatay 2002 iyo wixii ka dambeeya.
Wax dheeraad ah ka sii akhriso Folkhälsomyndigheten (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Waxa dhamaan waxqabadyadu/ganacsiyada sida ku xusan xeerarka iyo talobixinta guud ee Folkhälsomyndighetens, ay mas'uuliyad ka saaran tahay qaaditaanka tallaabooyinka ku habboon si la iskaga ilaaliyo faafitaanka fayruska covid-19.
Bay'adaha isboortiga, hoolalka tabobarka, jiimka, barkadaha dabaasha iyo waxyaabo kale oo badan, ayay tusaale ahaan noqon kartaa in ganacsigu
hubiyo inay jirto fursad qalabka ay dad badani isticmaaleen lagu tirtiraayo, tusaale ahaan qalabka jiimka, marka uu qof kastaa isticmaalo ka dib. Dawada jeermiska disha ama dawada wax lagu nadiifiyo ee caadiga ah ayaa la isticmaali karaa.
hubiyo inay jirto fursad gacmaha lagu dhaqaayo ama lagu isticmaalaayo dawada jeermis gacmaha disha oo la isku dhiirigeliyo nadaafadda gacmaha ee wanaagsan
hubiyo inay jiraan calaamado si muuqda/cad u qeexaaya in guriga la joogo haddii la jiran yahay iyo in nadaafadda gacmaha oo wanaagsan la yeesho
masaafada ku calaamadeeyaan dhulka, alaabta guriga ama hab kale ugu samee qaab looga fogaanaayo saxmadda baddan.
Ogsoonow in jiimka iyo goobaha isboortiga ee dadweynaha u furan uu sidoo kale waajib ka saaran yahay inay go'aamiyaan tirada dadka ee ugu badan iwm
Tilmaamaha kormeerka ee ganacsiyada loogu talogalay (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Tartanada iyo kulamada
Carruurta iyo dhalinyarta dhalatay 2002 ama wixii ka danbeeyey ayaa ka qeybqaadan karta hal ciyaara ama tartan maalin dhacaaya kooxdiiba iyo todobaadkiiba ee isboortiyada kooxaha oo banaanka lagu qabto.
Carruurta iyo dhalinyarta dhalatay 2002 ama wixii ka danbeeyey ayaa ka qeybqaadan karta hal ciyaara oo banaanka ka dhaceysa ugu badnaan hal mar todobaadkii taas oo ah ciyaaraha qofku kalidii sameeyo.
Kulamada iyo tartamada waa in lagu qabtaa deegaanka dhexdiisa, ama la xadidaa safrida, sida laga soo xigtey. Folkhälsomyndigheten. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Kulamada iyo tartamada heerka sare ah ayaa wali la sii sameyn karaa.
Kaamamka iyo koobabka xagaaga 2021
Waxqabadka kaamamka (xeryaha xagaaga la tago) iyo koobabka ayaa la qaban karaa laga bilaabo 1 Juun. Waxa kaamamka lagu qaban karaa meelaha gudaha iyo banaanka/dibaddaba ah labadaba. Ma jiraan wax xaddidaado ah oo saaran mudada xeradu lagu jiraayo ama uu koobku socon karo.
Waa inuu waxqabadku ugu dhaco qaab aan infegshanka la kala qaadeynin, iyadoo ku xiran haddii ay taasi ka dhaceyso gudaha iyo dibada, cabbirka lookaalka iyo inta qof ee ka qeybqaadaneysa.
Waa inuu waxqabadku koox ahaan ugu dhaco iyadoo ay dad tiro kooban ahi joogaan si fasalka, kooxda, ardaaga/daarada kaamka, kooxda xaqiijinta iyo wixii la mid ah aan la iskugu dhafin wax ka badan inta lagama maarmaanka ah. Iska ilaali kulamada ballaaran ee ka qeyqaateyaasha kaamka ama hogaamiyaasha dhex jooga hoolka cuntada, iridda laga soo galo, qolka shirarka/kulamada, iyo meelaha kale ee la wadaago. U hoyashada/seexashada u qorshee si ay tirada dadka ee ugu yar ugu wada joogaan isla qol oo iska ilaali hoolalka hurdada ee waaweyn. Waxaad linkiga hoosta ku taala ka helaysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxyaabaja laga fikiri karo.
Macluumaadka ka socda Folkhälsomyndigheten oo ku saabsan kaamamka iyo koobabka xagaaga 2021
Ururada isboortiga, dhaqanka och wakhtiyada firaaqada
Ururadu waa in sida ku xusan talobixinta guud ee Folkhälsomyndighetens ay:
marka ay suurtogal tahay ay tabobarka iyo waxqabadyada kale ku sameeyaan banaanka
dhimaan tirada dadka ee isla hal waqti joogta ama hab kale iskaga ilaaliyaan saxmadda
iska ilaalinta abaabulida ama ka qeybqaadashada kaamamka, tartamada, koobabka iyo tartamada kale, taas oo ay ka reeban yihiin cayaaraha noocyada heerka xirfad ahaaneed ahi.